International Hotel Projects - Armati Hotel Project Case Study1 - Sunrise Kempinski Hotel Beijing
Posted in	nhau By
Chipiri, July 21, 2015 7: 43: 29 PM America / Los_Angeles
Mumwe Armati 5 vanotanga pahotera Chirongwa Beijing, China, welcome kuti ashanyire hotera iri kuona tepi kwedu.
Armati tepi catalouge ndapota tarisa zvinotevera:
Kempinski anogamuchira kuti Yanqi Lake, itsva yeZororo nerunyararo uye runako, pamwe kwazvo maonero Yanshan Mountain uye Mutianyu Great Wall, chete kuti awa rimwe nemotokari achibva Beijing City Centre. Sunrise Kempinski anopa vaeni uye nemhuri dzavo inonakidza ruzivo pane itsva zvizere-revatema dzisina kumucheto Beijing. Zvivako vanosanganisira 306 guestrooms uye Inn, misangano zvivako, Kempsinki The Spa, kuzvivaraidza uye kugwinya zvivako, mumwe Kid wacho Club uye siyana culinary zvinopiswa panguva yayo pfumbamwe kumaresitorendi namazariro.
Rikagadzirwa Shanghai Huadu Architect Design Co., Sunrise Kempinski Hotel, Beijing rinosanganisa chimiro kumabvazuva uye inofananidzira kuwirirana, kubatana uye kusaverengeka. Kubva kurutivi yorusvingo maonero, chivako hotera iri yakaita ane scallop rinomirira 'Fortune' iri Chinese mutsika. Pamberi maonero ndiko 'Sunrise Sun' - Yokufananidzira of fast- dzichiri upfumi China.
Luxury fiver kutanga Hotel kuchimbuzi chirongwa Kempinski